juillet 2013 – filazantsaramada
JESOSY, ILAY MPANALALANA.
“Fa Izy no fihavanantsika, Izay naha iray antsika roa tonta…” Efesiana 2:14. Ny Renirano Mississipi (any Etazonia) dia toy ny hantsana goavana iray nampisaraka ny ilany atsinanana tamin’ny ilany andrefana fahizany. Niova izany tamin’ny taona 1870 tany ho any, rehefa notanterahina ny fananganana tetezana iray, asa teo ambany fitarihan’i James B. Eads, hahazoana miampita io […]
Publié parfilazantsaramada juillet 26, 2013 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur JESOSY, ILAY MPANALALANA.
Mpiara-miasa an-tsitrapo “Volontaire” FF
“Mahatoky Izay miantso anareo, sady Izy no hanefa izany” (ITes 5: 24) Ho fampandrosoana sy fampivelarana ny asa Fitoriana ny Filazantsara, ny FF dia miara-miasa amin’ny olona vonona hanolo-tanana azy amin’izany; isa-toerana : Fiangonana, Fikambanana, Sekoly, Université. Mpiara-miasa an-tsitrapo na « volontaire » moa no iantsoina azy ireo. Kristiana resy lahatra ary vononana hiandraikitra ny […]
Publié parfilazantsaramada juillet 26, 2013 septembre 30, 2013 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Mpiara-miasa an-tsitrapo “Volontaire” FF
NY FAHOTANA: ny antony, ny sandany, ny fitsaboana azy
“Fa samy alaim-panahy ny olona raha tarihin’ny filany sy fitahiny izy. Ary ny filana rehefa torontoronina, dia miteraka ota; ary ny ota rehefa tanteraka dia miteraka fahafatesana”. Jakoba 1:14-15 Nifandona tamin’ny fiaran’ny fiangonana iray ity mpitondra fiara iray hafa efa mamomamo, tamin’ny lalam-pirenena iray. Ota ny fahamamoana eo anatrehan’Andriamanitra, ota izay mitombo ary rehefa tonga […]
Publié parfilazantsaramada juillet 19, 2013 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur NY FAHOTANA: ny antony, ny sandany, ny fitsaboana azy
« Fa ankehitriny, rehefa natao afaka tamin’ny ota hianareo ka efa tonga mpanompon’Andriamanitra, dia manana ny vokatrareo ho amin’ny fahamasinana, ary ny farany dia fiainana mandrakizay. » Romana 6: 22 – Ny atao hoe ota dia ny fikomiana amin’Andriamanitra, na ny fialàna amin’Andriamanitra, na ny faniratsirana ny didiny…Voalaza ao amin’ny Romana 6: 23 « fa fahafatesana no tambin’ny […]
Publié parfilazantsaramada juillet 12, 2013 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur MPANOMPON’NY FAHAMARINANA.
“ fa mitomboa amin’ny fahasoavana sy ny fahalalana tsara an’I Jesosy Kristy, Tompontsika sy Mpamonjy » (II Pet 3: 18a) Anisan’ny fomba iray entin’ny LHM ampahafantarana ireo programan’asa iandraiketany ny famangiana Fiangonana mandritry ny fotoam-pivavahana Alahady. Fotoana iray ihany koa hanentanana ireo kristiana mba handroso hatrany amin’ny fandalinanana ny Tenin’Andriamanitra izany mba tsy ho fahazarana […]
Publié parfilazantsaramada juillet 10, 2013 septembre 30, 2013 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Famangiana Fiangonana
NY FIHAVANANA AMIN’ANDRIAMANITRA NO VOALOHANY
«…, solon’i Kristy izahay ka mangataka indrindra aminareo hoe: mihavàna amin’Andriamanitra anie hianareo» (2Korintiana 5: 20). Tao amin’ny tanàna afovoany andrefana iray any Etazonia dia nisy olona sasantsasany nanapa-kevitra ny hanatona ny fiangonana iray tsy lavitra azy teo “mba hiaina izany hoe fampihavanana ara-bolon-koditra tena izy izany”. Taorian’ny hetsika nataon’ireo fiangonan-dehibe izay nangataka am-pahibemaso famelàna […]
Publié parfilazantsaramada juillet 5, 2013 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur NY FIHAVANANA AMIN’ANDRIAMANITRA NO VOALOHANY